मिडिया एनपी एनपी – Page2– Medianp
दुई दाजुभाई सत्य र स्वरुप राजले यसरी मच्चाए ‘द भ्वाइस आफ नेपाल’ को स्टेज, (हेनुहोस् भिडियोमा)
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१३:०४0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । एकसाथ प्रसारण सुरु गरेको दुई रियालीटी सो द भ्वाइस अफ नेपाल र नेपाल आइडल अन्तिम चरणमा रहेको छ । द भ्वाइस अफ नेपालले आफ्ना चार जना प्रतिस्पर्धीलाई ग्राण्ड फिनालेको अन्तिम चरणमा पुर्याएको
इपिएल लाइभमा केटीहरु मात्र देखाएपछि केटाहरु आक्रोशित, क्यामेराम्यान विरुद्ध यसरी गरे विरोध
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१२:२२0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निकै अगाडी रहेको नोपल युवा पुस्तामा क्रिकेटको मोह बढ्दै गएको पाइएको छ । यतिबेला त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एभरेष्ट प्रिमियर लिग चलिरहेकोछ । आइपिएलमा क्रिकेट जगतका अन्तर्राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरु
स्वस्थ रहन एक दिनमा कति पानी कुन समयम पिउँने ? हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५११:४४0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । पानी स्वास्थ्यको लागि निकै जरुरी पर्छ । शरिरको वनावटको आधारमा पानी पिउन जरुरी रहेको हुन्छ । हरेक दिन महिला र पुरुषले कति पानी पिउने भनेर गरेको एक अध्ययमा युवा अवस्थामा रहेको
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर २४, २०७५१०:५२0
काठमाडौँ,२४ मंसिर । पञ्जीकरण नभएका यातायातको साधन पुष १ गतेदेखि सडकमा गुड्न नपाउने विभागले जनाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मंसिर मसान्त सम्ममा पञ्जीकरण नभएका गुड्न नदिने
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर २३, २०७५१२:०९0
काठमाडौँ, २३ मंसिर । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारण १२ वर्ष देखि फलामको साङ्लोमा बाँधिएका ४४ वर्षिय उमाकान्त चौधरीको उद्दार गरिएको छ । साङ्लोमै बित्यो उमाकान्तका जीवन शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सप्तरीका प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर २३, २०७५१२:०२0
काठमाडौँ,२३ मंसिर । श्रीमानको दिर्घायुको कामना गर्दै अनि असल श्रीमानको पाउ भनि महिलाहरुले हरेक सोमबार वर्त बस्ने गरेको देखेका छौँ । तर संसारमा यस्तो ठाउँ छ जहाँ कुनै पुरुषले महिलाले जस्तै सिंगार पटार गरेर
यस्तो छ जमिन भन्दा ३ फिट मुनि रहेको अनौठो गाउँ
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर २२, २०७५१७:३९0
काठमाडौँ,२२ मंसिर । दुनियाँ साच्चै अनौठो रहेको छ । हरेक ठाउँ नयाँ संरचना नयाँ परिवेशले संसारलाई अनौठो बनाएको हुन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको जमिन भन्दा ३ हजार फिट तल रहेको अमेरिकाको प्रसिद्ध ग्राण्ड क्यानोन नजिकैको हवासू
यस्तो छ भगवान शिवले बाघको छाला लगाउनुको कारण
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर २२, २०७५१७:०२0
काठमाडौँ,२२ मंसिर । भगवान शिव भने वित्तिकै सबैको मनमा एउटा तस्वीर झल्किन्छ । जो कोहीको दिमागमा सचित्र निर्माण हुन्छ, शिवको तस्वीर, हातमा त्रिशुल लिएको, बाघको छाला बेरेको, शिरका चन्द्रमा र गंगासहित नागको माला लगाएको ।
सावधान ! टुसा पलाएको र हरियो आलु नै बन्न सक्छ विष !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर २२, २०७५१५:५६0
काठमाडौँ,२२ मंसिर । प्राय हामी सबैको घरमा आलुको परिकार पाकिरहन्छ । आलुलाई तरकारीको राजा पनि भन्ने गरिन्छ । हरेक परिकारम मिल्ने भएकाले आलुलाई नै तरकारी भन्ने गरिन्छ । तर निकै स्वादिलो मानिने तरिकारी आलु विष
सार्वजनिक यातायातमा महिलालाई छोए जेल चलान
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर २२, २०७५१४:३६0
काठमाडौँ,२२ मंसिर । सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन दुुव्र्यवहरलाई रोक्नको लागि नयाँ अभियान सुरु गरिएको छ । गत साउन १८ देखि प्रहरीले सुरु गरेको नयाँ अभियानमा महिला सुरक्षाको लागि प्रहरीले सेप्टिपनिको विरण गरेको हो । यसरी